ज्योतिलाई बिहे गर्ने हतारो – Khabar Silo
गायिका ज्योति मगरलाई बिहे गर्ने हतारो छ। अब हुर्केकी छोरीलाई बिहेको दबाब पनि हुँदो हो। सायद ज्योति राम्रो वरको खोजीमा छिन् क्यार ! अब मन मिल्ने साथी भएको भए पनि लगन कसिहाल्थिन् होला ! तर विचरी ज्योति अहिले सिंगल छिन्। उमेर बढ्दै गएपछि ज्योतिलाई पनि बिहेको चिन्ता बाक्लिदै जान थालेकाले होला, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बेलाबेलामा आफू अविवाहित रहेको घोषणा गर्छिन्।
हालै उनले फेसबुकमा आफूलाई अविवाहित युवती घोषणा गर्दै आफ्ना केही तस्बिर पनि राखिन्। अब यसरी फेसबुकमै लेख्नुको अर्थ त कोही भेटिन्छ भनेर पनि हो कि ! तर त्यही पोस्टमा भने धेरै जनाले उनको बिहेकै बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
परिवारको समस्या के हुन्छ भने एउटा समयसम्म कर्कर गर्ने हो, समय घर्किएपछि रहर गरेर हुँदैन। त्यसैले आफैँ खोजोस् भन्ने चाहना पनि होला। बिहे गर्न मन लागेसी फेसबुकमा होइन ज्योतिजी, घरमै घुमाउरो पाराले भन्नु प-यो ! हुन त फेसबुकमा सिंगल छु भन्नु पनि घरका अग्रजलाई झक्झक्याउनु पनि होला ! जे होस्, ज्योतिजी, तपाईंको यो आइडिया गज्जबको छ।
‘अरु ग्ल्यामर, ज्योति मगर भल्गर किन ? ‘
उ’त्तेजना र शरीर प्रदर्शनमा चर्चा बटुलेकी कलालकार ज्योति मगरले आफूले जस्तो सुकै सुटिंग गरे पनि अरुले नराम्रो सोच्ने गरेको बताएकी छिन् । आफ्नो नाच र अरुको नाँच तथा तस्बिर तुलना गर्दै प्रश्न गरिन्, ‘अरुको त्यही तस्बिर ग्ल्यामर तर ज्योति मगरको त्यहि तस्बिर किन भल्गर ?
उनले भनिन्, ‘अरु कलाकारका गीत र नाचहरु आफ्नोभन्न्दा पनि उ’त्तेजक अं’ग प्रदर्शन हुन्छन् तर मैले तीजको गीतमा गुन्यु लगाएर नाच्दा पनि अं’ग प्रदर्शन भन्छन्, यो हेर्ने दृष्टिकोण हो ।’ कलाकारहरुलाई गीत गाएर र नाचेर मात्र जीवन निर्वाह गर्न समस्या भएको बताउदै मेला र महोत्सवले ज्यान पाल्न सजिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘स्टेच कार्यक्रम मेला र महोत्सवले नै दुई छाक खान सजिलो भएको छ’, मगरले भनिन् ।
रोल्पामा जन्मिएकी ज्योतीले गीत संगीतमा आफ्नो बालापनको रुचीले लागेको बताउदै गीत संगीतले दर्शकको माया र ममता पाएको बताइन् । गीत संगीतमै लागेको कारण आफू विभिन्न १६ देश र नेपालको झण्डै ५५ जिल्लामा जाने अवसर पाएको बताइन्। आफूले गीत संगीतलाई माया गरिरहने बताएकी ज्योतीले अरुले भन्ने र सोच्ने जस्तो आफ्नो व्यवहार नभएको बताएकी छिन् । आफूले गुन्यु लगाएर नाचेका तस्बिर र भिडियोमा समेत कमेन्ट भने उत्तेजना र शरीर प्रदर्शन भनेर आउने गरेको उनको आरोप छ।
उनले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनुनै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको प्रष्ट पारेकी छिन् । दर्शकको माया र ममताले आफू अगाडि बढेको बताउदै मगरले पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उमेर भने बताइनन् ।
नेपाली फिल्म उद्योगमा बेला–बेला कलाकारले लिने पारिश्रमिकको विषयले राम्रै चर्चा पाउँछ।केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले कलाकारले लिने पारिश्रमिकबारे अभिव्यक्ति दिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘गम्भीर भएर भन्न चाहन्छु, २० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छु भने मैले ५० लाखको काम दिन सक्नुपर्छ। २० लाख, १५ लाख पारिश्रमिक लिएर नाकमात्र बढाउनेभन्दा पनि त्यति रकम लिएपछि निर्माताको […]